Because of the way t - İngilizce - Birmanca Çeviri ve Örnekler
ငါတို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏ အိမ်တော် ကို ထောက်၍၊ သင်၏အကျိုးကို ရှာပါမည်။
လူဆိတ်ညံလျက်ရှိသော ဇိအုန်တောင်ပေါ်မှာ မြေခွေးတို့သည် သွားလာကြပါ၏။
ထာဝရဘုရား သည်ပြင်းစွာအမျက်ထွက်တော်မူသော အားဖြင့် ငြိမ်ဝပ်စွာ နေရာ အရပ်တို့ သည်လည်း ပယ်ရှင်းဖျက်ဆီးခြင်းကို ခံရကြ၏။
မိတ်သိပ်ခြင်းအရှိန်ကြောင့် အကျွန်ုပ်တို့၏ အရေသည် မီးဖိုကဲ့သို့ မည်းပါ၏။
တော၌ထားဘေးနှင့်တွေ့၍ အသေခံလျက် စားစရာကို ရှာရကြပါ၏။
ထိုကြောင့်အဓမ္မလူ၊ ထောင်လွှားစော်ကားခြင်းကိုခံရ၍ အော်ဟစ်သော်လည်း၊ ဘုရားသခင်သည် ထူးတော်မမူ။
တရားတော်ကို စွန့်ပယ်သော အဓမ္မလူတို့ ကြောင့်၊ အကျွန်ုပ်၌ ပူလောင်သော စိတ်စွဲလန်းလျက် ရှိပါ၏။
အဒေါနိယသည်လည်း ရှောလမုန်ကို ကြောက် သဖြင့် ထသွား၍ ယဇ်ပလ္လင်ဦးချိုတို့ကို ကိုင်လျက်နေ၏။
သိုထားသော စပါးဟောင်းကို စား၍ မကုန်မှီ၊ စပါးသစ်ပေါ်သောကြောင့်၊ အဟောင်းကို ထုတ်ရကြ မည်။
ကိုယ်တော်၌ မွှေးကြိုင်းသော နံ့သာဆီကဲ့သို့၊ နာမတော်သည် သွန်းလောင်းသောနံ့သာဆီဖြစ်ပါ၏။ ထိုကြောင့်သတို့သမီးကညာတို့သည် ကိုယ်တော်ကိုချစ်ကြ ပါ၏။
မက်ဆီဒိုနီးယားက မွတ်စလင် တိမ်းရှောင်သူတွေ ကြက်ခြေနီက ပေးတဲ့ အစာထုတ်ကို ငြင်းပယ်နေကြတယ်။
ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် မိဒျန်အမျိုးသားတို့ကြောင့် အလွန်ဆင်းရဲ၍ ထာဝရဘုရားအား ဟစ်ကြော်ကြ၏။
ထိုသို့ မိဒျန်အမျိုးသားတို့ကြောင့်၊ ထာဝရဘုရားအား ဟစ်ကြော်ကြသောအခါ၊
ယုဒလူတို့၏ အဘိတ်နေ့ဖြစ်သောကြောင့်၊ အနီးအပါးတွင်ရှိသော ထိုသင်္ချိုင်းအတွင်း၌ အလောင်း တော်ကိုထားကြ၏။
ထိုကြောင့်၊ ကောင်းကင်တမန်များကို ထောက်၍၊ မိန်းမသည် မိမိခေါင်းကို ဖုံးရမည်။
ငတ်မွတ်သော သူတို့ကို လမ်းလွဲစေကြ၏။ ဆင်းရဲသောပြည်သားတို့သည် စုဝေး၍ ပုန်းရှောင်လျက် နေရကြ၏။
ထိုအမှုကို ထာဝရဘုရားမြင်သောအခါ၊ အမျက် တော်ထွက်၍ သားသမီးတော်တို့ကို စွန့်ပစ်တော်မူလျက်၊
ထိုအခါ မောရှေကို လွှတ်တော်မူ၏။ မယားကလည်း၊ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကြောင့်၊ သင်သည် အကျွန်ုပ်၌ အသွေးနှင့်ယှဉ်သောလင်ဖြစ်၏ဟု ဆိုသတည်း။
The Aquino administration only wants this ratified because of the country’s dispute with China over the West Philippine Sea.
ကျွန်တော်​တို့​ကို ကောက်ရိုး​မျှင်​တွေ လာ​မ​ဆွဲ​ခိုင်း​ပါ​နဲ့။
ဥာဏ်ပညာလမ်းမှ လွှဲသွားသော သူသည် သင်္ချိုင်းသား အစုအဝေး၌ နေရာကျလိမ့်မည်။
kalo vradi (Almanca>Yunanca)proliferative endometrium (İngilizce>Tagalogca)deivid (İngilizce>Portekizce)drive thru (İngilizce>Tagalogca)dress appropriately (İngilizce>Tagalogca)sumakit ang tiyan ko (Tagalogca>İngilizce)hei, hvordan har du det? (Norveççe>İngilizce)dois it true (İngilizce>Korece)kunth (İngilizce>Hollandaca)during the day (İngilizce>Tagalogca)sana makarating ako sa langit (Tagalogca>İngilizce)loi du talion (Fransızca>Latince)v (Almanca>İngilizce)energy conservation (İngilizce>Tagalogca)taina mo (Tagalogca>İngilizce)sammenkomster (Danca>İngilizce)bernbieter (İtalyanca>İngilizce)mombeltrán (İngilizce>Almanca)boa tatica (Portekizce>İngilizce)sumakay ako sa eroplano (Tagalogca>İngilizce)don't mess up with me (İngilizce>Tagalogca)suntukan nalang (Tagalogca>İngilizce)kukuha ako ng baril (Tagalogca>İngilizce)everytime?tagalog (İngilizce>Tagalogca)verily thou shalt be fed (İngilizce>Tamilce)